‘राम्रो काम गर्नुहोस्, आमाबुवाको लागि त्यो भन्दा अर्को ठूलो खुशी हुँदैन’ - Sunaulo Nepal
‘राम्रो काम गर्नुहोस्, आमाबुवाको लागि त्यो...
बुवाको मुख हेर्ने दिन :
‘राम्रो काम गर्नुहोस्, आमाबुवाको लागि त्यो भन्दा अर्को ठूलो खुशी हुँदैन’
भाद्र २२, २०७८ मंगलवार ११:४४ बजे
आज बुवाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् कुसे औँसी । यसै अवसरमा हामीले एजिङ नेपालका अध्यक्ष कृष्णमुरारी गौतम अर्थात् चट्याङ मास्टरसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनी यो पर्व ‘बा’को नभएर सम्पूर्ण छोराछोरीको भएको बताउछन् । बुवाआमाको लागि घर, गाडी र सम्पत्ति होइन मान्छे अर्थात् सन्तान ठूलो कुरा भएको उनको भनाइ छ । गौतमले जसरी बाआमाप्रति श्रद्धाभाव देखिन्छ जस्तो लाग्छ देखाउन अनुरोध गरेका छन् । एक दिनको प्रभाव सधैभर पर्ने भएकाले यो दिनको महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ । सुनौलो नेपालका लागि गौतमसँग दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंलाई बुवाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना
शुभ जीवन नै उहाँको हो । शुभ दिन उहाँको हो । धन्यवाद ।
बुवाको मुख हेर्ने दिनको सांस्कृतिक महत्व के छ ?
त्यो पाटो धेरै पण्डितले व्याख्या गर्दै आएका छन् । मैले देखेको चाहिँ जीवनको महत्त्व हो । त्यो तपाईँको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ । तपाईंको सन्तानको लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर हेर्नुभयो भने यो पूर्खाले दिएर गएको पर्व हो । मेरा छोराछोरी र नातीनातिना खुशी रहुन भनेर हाम्रो बाआमाले हामीलाई दिएको सम्पत्ति हो । यो पर्व बाको लागि होइन । कतिपय बा बितिसक्नु भयो । बा यसै बुढो भइसक्नुभयो । सायद कति वर्षपछि, महिनापछि वा कतिदिनपछि बित्नु पनि हुन्छ होला !
हामीले बुबाको मुख हेर्ने दिन म बुवाको मुख हेर्न जाँदैछु । बुढा सिराउलान भन्ने हो भनेदेखि नहेर्नुहोस् बुवाको मुख । यस्तो सन्तानले मुख हेर्नुको अर्थ नै छैन । तर, तपाईंले यो संस्कारलाई राखिराखे भोलि तपाईंको मुख तपाईँका छोराछोरीले हेर्छन् । म पनि बुढो हुन्छु । मेरी छोरी मेरो मुख हेर्न आउँछिन् । समाजलाई एउटा शुत्रमा बाध्ने धागो छ । त्यो चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसैले यो बाबु आमाको लागि होइन मेरो सन्तान र मेरो बुढ्यौलीका लागि हो भनेर हेर्नुभयो भने महत्त्व यहाँभन्दा बढी भन्नु पर्दैन ।
यो पर्व ‘बा’को होइन । तपाईंको लागि हो । बा यसै बुढो भइसक्नुभयो । कतिपय बा बितिसक्नुभयो । तपाईंको बा पनि कतिदिन, कति महिना वा कति वर्षपछि बित्नु पनि हुन्छ होला !
कुरा गर्दागर्दै तपाईँको आँखाबाट आँसु झरेको छ । किन यत्ति धेरै भावनात्मक बनाउँछ यो सम्बन्धनले ?
म नभए पनि पृथ्वी चलेकै थियो । मेरो मृत्यु पश्चात पनि पृथ्वी चलिरहन्छ । तर, छोटो जिन्दगीमा हासेँ, खेलेँ, रोएँ, उफ्रिएँ, कमाएँ, जितेँ, हारेँ जे जे पाएँ मैले त्यो सबै आमा बुवाकै कारणले हो । जुनसुकै सन्तानले आफ्नो अनुहार यसो ऐनामा हेर्नुहोस् । अनुहार आमासँग मिल्छ कि, बाबुसँग मिल्छ भनेर हेर्नुभयो भने कताकता आमाको नजिक नजिक अथवा बुवाको नजिकनजिक गएको देख्नुहुन्छ । त्यो आमाबाको शरीरको केही अंश हो तपाईं । म छोरो होइन, त्यसकै अंग हो । भावनासँग जोडिनु वा जोडिन पाउनु अहोभाग्य हो । शरीरसँग जोडिएको छु । मेरो रुपसँग जोडिएको छु, मेरो बानी व्यवहारसँग जोडिएको छु । कस्तो ठ्याक्कै बाबुको बानी आएछ यसलाई त ह ! ओहो कस्तो आमाजस्तै रैछ यो त भनेर भन्छन्।
बाआमा कहिल्यै मर्दैनन् । म हुँदासम्म मेरो बा आमा मर्नुहुन्न । पहिला बाबुको भूमिका खेल्ने र आमाको भूमिका खेल्ने भिन्न शरीर थियो । अब अहिले मैले नै बाबुको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । आमाको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । म अब बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
वर्षमा एक दिन मीठो खान दिएर बुवाप्रतिको कर्तव्य पूरा हुन्छ ?
नेपालले प्रजातन्त्र दिवस मनाउछ । त्यो दिन प्रजातन्त्र दिवस हुने र बाँकी दिन प्रजातन्त्र नहुने हो र ? त्यो होइन नि । भावना जागृत गर्ने एउटा विशेष दिनको रुपमा, विशेष पर्वको रुपमा बुवालाई सम्मान गरिन्छ । यो जीवन, रगत र अस्तित्वको सम्बन्ध भएको कुरा हो । जसरी राष्ट्रसँग मेरो आत्मियता छ त्यो भन्दा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध आमाबुवासँग हुन्छ । मनुष्य भावनाहरुको पिण्ड हो । एक दिनको चार्ड मनाउँदा तपाईंले भावना बढाउन सक्नुहुन्छ । त्यसलाई मजबुत बनाउने हो ।
समाजले चाहिँ बुवाआमालाई सम्मान गर्न हामीलाई के सिकायो ?
समाजले जहिले पनि सिकाउछ । बाआमाले सिकाउनुहुन्छ । तर, कुन कुरालाई कति महत्त्व दिएर भावनात्मक रुपमा कति जोड्छ भनेर अनुभूत गर्न लगाउँछ । समाजले पैसा कमाउन सिकायो । समाजमा देखिएको यो एउटा विकृति हो । पैशामुखी व्यक्ति भए । मान्छे पैसा कमाउन, काठमाडौंमा अग्लो घर बनाउन जन्मिएजस्तो गर्छ । मानव जीवनको सुन्दर रुपलाई पैसामा लगेर खाँदेको कुरा बढी सिकाएको देखिन्छ । यो गलत हो । समाजप्रतिको दायित्व सिकाइएन । भौतिक समृद्धि आवश्यक छ तर मानव जीवनका लागि भौतिक समृद्धि मात्र सबै कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा चाडपर्वले हाम्रो सम्बन्धलाई दह्रो बनाउँछ ।
सन्तानलाई बाबुआमाप्रति गर्नुपर्ने दायित्व किन सिकाउनुपर्छ ?
मान्छे भन्ने जातलाई सिक्नुपर्छ । तर, हामी बाआमालाई गुरु मान्दैनौँ । पहिलो गुरु आमाबुवा हुनुहुन्छ । त्यसपछि पाँच छ थरी गुरु हुन्छन् । यी सबैले तपाईंको संरक्षण गर्न चाहन्छन् । जसले मद्दत गर्छ उसलाई नमस्कार गर्नु भनेको मात्र हो । लड्डु लिएर जानु भनेको छैन ।
अहिले सबै व्यस्त छु भन्छन् । बुबाआमालाई कसरी समय दिने ?
मानवीय गुणबाट प्रतिष्ठाको खोजी गर्नुपर्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । सबै हतारमा छन् । दौडधुप गरिराखेका छन् । एउटा अपूर्ण जीवन र मानवीय गुणको क्षति हुँदै गएको देखिन्छ । मानव हुनुको सुन्दरता नबुझेको जस्तो देखिन्छ । आफूतिर ध्यान नदिँदा यो परिणाम आएको हो । बुवाको मुख हेर्ने दिनको असर, त्यसले तपाईंमा पार्ने प्रभाव । त्यसलाई सही ढंगले मनाउँदा तपाईंमा उत्पन्न हुने भावना, ती भावनाले तपाईंमा आउने आनन्द र त्यो भावनाले असर पार्ने तपाईंका सन्तानसँगै समाज खुशी र सुरक्षित हुने उपाय नै बुवाको मुख हेर्ने दिनको महत्त्व हो । बुवाआमालाई सम्मान नगर्नु दुःखको मार्ग हो ।
कतिपयलाई बाबुको मुह हेर्ने दिन पनि क्या झन्झट । बिदा छैन । दुई चारवटा मिटिङ आजै थियो । कहाँ बाबुको मुख हेर्न जाने ? नगए बुढा रिसाउँछन् । बेलुका वा भोलि गएर फकाउला भन्ने किसिमको व्यवहार सामान्य हुन थाल्यो भने हाम्रो सिंगो समाज पतनतिर गएको छ । हामी सबै दुःखको मार्गमा हिड्दै छौँ । अन्धकार भविष्य बनाउन खोज्दै छौँ ।
हामीमा क्रोध, रिस, रागका भावना बढी हुने माया, प्रेम, स्नेहको भावना कम हुने देखिन्छ । मानिससँग भएका केही गुणकै कारण उसलाई चेतनशील प्राणाी भनिएको हो । तपाईंले बिहान बेलुका पूजापाठ गर्नु देवी देवताको कल्याणहोस् भनेर होइन । त्यो गर्नुभयो भने तपाईंलाई एक किसिमको खुशी मिल्छ । त्यो स्वाद हामीले बिर्सनु हुँदैन । आफ्नो मुहानको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ । किनभने अलिकति तल गएपछि हामी पनि मुहान हौँ ।
पूर्वीय सभ्यताको बलियो पक्षले मान्छे बाहिर राम्रो देखिँएर हुँदैन । त्यसका भावना राम्रो हुनुपर्छ, सोचाई राम्रो हुनुपर्छ भन्छ । हामीले त्यसलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
बुढाबुढी अर्थात् बाबुआमाको खुशी के हो ?
तपाईंलाई मोटर किन्दा खुशी लाग्छ । तर, बाबुआमा असल छोरो, सक्षम छोरो र गुणवान छोरो भयो भने सबैभन्दा ठूलो आर्जन ठान्नुहुन्छ । गाडी होइन । सम्पत्ति होइन । मान्छे चाहिँ महत्वपूर्ण हो । छोरा वा छोरी चाहिँ महत्वपूर्ण हो । छोराछोरीको क्षयमा आमाबुबालाई दुख्छ । त्यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस्ता पर्व आवश्यक पर्छ । आफूभन्दा ठूलाबाट आशिर्वाद लिने पर्वको आवश्यक छ । अन्तिममा विजयी हुने पूर्वीय सभ्यताले राम्रो विधि बनाएको छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् त्यसमा बुवाआमा खुशी हुनुहुन्छ । आत्मियता बढाउँदै जानु यस्ता चाडपर्वको महत्व छ ।
अहिले हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ । बुबाको मुख हेर्ने दिनमा बुवालाई भेट्ने, आमाको मुख हेर्ने दिनमा आमालाई भेट्ने । अनि किस्तीमा फलफूल राख्ने र बुवाआमाको महत्व यत्तिमा सीमित गरेर वर्षभर बिर्सने पो चलन आयो त ।
होइन । जसले यत्ति गर्छ भने उसले वर्षभर पूरै बिर्सदैन । त्यत्ति पनि नगर्ने छन् । उनीहरुको सम्मानमा जेसुकै गर तर गर्न चाहिँ गर के । बाआमाप्रति श्रद्धाभाव जसरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ देखाऊ । तिमी व्यक्त होऊ । एक दिनको प्रभाव वर्षभर पर्नसक्छ । एक दिन सही काम गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव आगामी दिनमा पर्छ । पाँच मिनेट गर्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् । दिनका दिन सम्भव हुँदैन । तर, दिनका दिन भावना जागृत गर्नुपर्छ । तपाईंको खुशीको स्रोत नि त्यही हो । त्यो नगरे तपाईंलाई खुशी मिल्दैन ।
# चट्याङ मास्टर
# कृष्णमुरारी गौतम